मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन‘के गर्ने होला ? – Khoj Dainik
March 24, 2021 adminLeaveaComment on मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन‘के गर्ने होला ?
डेड्म्म नहुँदा मलाई घर मा साथी दिनु भनेर बोलाई । म पनि घर्मा भनेर साथीको घर गए । साथी र उस्को दाजु रैछ घर मा ।दाई चै गोल खेल्नु जानु भको रोइछ । मलाई त्यो दाई एक्दम हेन्ड्सम लाग्छ । साथी दोकान गकी थि भरै पढ्दा निन्द्रालाग्छ भनेर चिप्स हरु लिनु, म खाना बनाएर बसिराथे दाई आउनु भो । गर्मिले होला भेस्ट खोल्नु भाथियो, म त त्यो देखेर हेरे को हेरै भएछु बडी एक्दम से’क्सी थियो ।कती खेर आएको फुच्ची भन्नु भो, मलाई त्यो दाई ले सधै फुच्ची भनेर बोलाउनु हुन्छ । मैले आघिनै भने, आनी दाई नुहाउन लाई बहिर कल मा जानुभो । भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस